Mari zvaunotenga muchitoro chepamutemo cheApple pasina mubereko | IPhone nhau
Zvekare kutenga kwakabhadharwa mune chero chigadzirwa cheApple chinopfuura ma150 euros 0% kufarira. Iko kusimudzira kunowanzoitwa kuApple nguva nenguva uye pamazuva chaiwo seaya atiri iye zvino. Izvi zvinoreva kuti isu hatibhadhare chero chinhu kuti tiwane mari yechigadzirwa saka kusimudzira kunonakidza.
Mune ino kesi, zvakajairika kuti Cetelem atibhadharise mhindu yekutenga kwakaitwa muzvitoro zveApple patinopa mari, asi izvozvi uye Kusvikira inotevera Ndira 17, 2019 tichakwanisa kunakidzwa nekutenga nemari pasina mubereko.
Pakati pemwedzi mitatu ne3 pasina mubereko
Chinhu chakanaka pamusoro peichi ndechekuti isu tinogona kubhadhara chero chigadzirwa chinopfuura huwandu hwe150 euros uye iyo yakanyanya nguva ingori mwedzi gumi nemaviri yekugadzirisa, chii chinoitika mumwedzi gumi nembiri iyi chinowedzera kufarira. Kukwidziridzwa kwakanaka kwazvo sezvo isu tichigona kukumbirawo mari yatiri kuda kubhadhara chigadzirwa, hazvidi kuti ubvunze mari yese uye kushanduka uku kwakanaka kune avo vane mari shoma kuti vatenge chigadzirwa cheApple kubvira icho inovabvumira kuti vasvike kuitenga zvisati zvaitika uye vasina kubhadhara zvakanyanya.
Kukwidziridzwa kunowanikwa muzvitoro zveApple uye mune webhu pamhepo yekambani uko kwatingaite kuverenga kweyemari iyo yatichazofanira kubhadhara mwedzi wega wega nezvose nenzira yakapusa. Muchiitiko chekuti iwe wakambotsigira chigadzirwa neApple, zvese zvinokurumidza uye zvakapusa, kana tisina kumbobhadhara chero chigadzirwa tichafanirwa kugadzira chikwereti naCetelem kare, asi isu takatozivisa kare kuti hazvina kuomesa zvachose. Isu tiri pachena kuti vakomana veCupertino vakasarudza a nguva yakanaka yemushandirapamwe wemari uyu pamutengo 0.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Mari zvaunotenga muchitoro chepamutemo cheApple pasina mubereko